Igumbi elisetyenziswa nangabanye abantu e ifama sinombuki zindwendwe onguTim
Ngaba uziva ngathi unomdla? Elona phupha lakho likhulu kukufumana ukuhlala kwifama yekofu, uhlala kwindalo? Uyafuna ukwazi ngakumbi ngeNicaragua… Sithetha ukuba NGOKWENENE siyazi? Ngaba ujonge indawo efanelekileyo yokuphumla?
Le ndawo yeyakho!
I-Finca El Arbol ayiyona indawo eqhelekileyo. Ayisiyobhedi kuphela, ikhitshi kunye negumbi lokuhlala. Asiyondawo yokuhlala kuphela.
Imalunga nokuhlala kwiintaba zekofu ezintle zaseNicaragua, ezingqongwe bubuhle obumangalisayo bendalo.
Igumbi esilinikezelayo limele amaxabiso ethu kunye nendlela yokuphila: uthobekile kwaye ucocekile kodwa ukhululekile kwaye ukhululekile. Uya kuba nebhedi enye kunye nembono kwigadi yefama.
Sigqibezela ikhitshi labucala elinayo yonke into oyifunayo ukupheka ukutya okumnandi: ipizza/i-oveni yesonka, isitovu segesi (iyeza kwakamsinya, okwangoku unokusebenzisa isitovu esibaselwe ngamaplanga kwigumbi lokuphekela elihlangeneyo), isigrisi sekofu kunye nezixhobo zokwenza ikofu ( siza kukufundisa ukwenza ikofu njengengcali ukuba unomdla).
Ingcebiso encinci : buza kumgadi wethu ukuba ufuna imifuno okanye imifuno emitsha.
Sikwasebenza kwindawo yabucala enesofa emangalisayo kunye nethala leencwadi elikhulu ukuze siphumle kwaye sifunde iincwadi ezininzi esinazo! Indawo egqibeleleyo yokuphumla ngokufakwa okuhle kunye nokushushu okwenziwe ngegadi lemongrass umzekelo. Zininzi ezinye iindawo ezijikeleze apho unokonwaba khona ngencwadi okanye ubone nje ubomi kwifama idlula.
Kukho elinye igumbi lokuhlala ekwabelwana ngalo apho uya kudibana nabantu abahlala nabasebenza efama. Lithuba elihle lokufumanisa inkcubeko entsha, indlela entsha yokubona ubomi. Ukuntywiliselwa kokwenyani kunye nokwenyani kubomi baseNicaragua…
Wamkelekile kwiNicaragua yokwenyani!
I-Finca El Arbol yiparadesi yokwenyani apho unokonwabela ukutsha komphakamo kodwa uthathe ixesha lokujonga ezinye iintaka ezingaqhelekanga, amakhulu amabhabhathane ebhabha egadini kwaye ngokuqinisekileyo nemithi emikhulu nemihle ekhula efama. Ngaphaya koko, unokuthatha uhambo lokuhamba kwifama yekofu (imizuzu engama-30 kuphela ukuya kweyona ndawo iphakamileyo efama), uzama ukwahlula iindidi zekofu kwaye ngokuqinisekileyo uncoma iimbono ezimangalisayo!
Apha, lungele ukuphuma kwindawo yakho yokuthuthuzela. Okungenani… kancinci nje ;) Nokuba senza konke okusemandleni ethu yonke imihla ukubonelela ngeyona ndawo yokuhlala isemgangathweni kangangoko kunokwenzeka, kufuneka wazi ukuba uyakuba ngokwendalo. Yiyo loo nto, kunokwenzeka ukuba ufumane rhoqo izinambuzane ezincinci, uthuli okanye ingxolo yendalo. Akukho maxhala, akukho nto inokumisa ubuthongo bakho obunzulu kodwa sifuna ukuba wazi. Ayiyiyo ihotele yeenkwenkwezi ezi-5 kodwa ngamava eenkwenkwezi ezi-5, ngokungathandabuzekiyo!
Enye inqaku elibalulekileyo: akukho wifi. Sicinga ukuba ukuhlala ngaphandle kwe-intanethi iintsuku ezimbalwa kunokuba yidetox elungileyo engqondweni yakho! Kwaye ukuba ufuna ngokwenene ukusefa kwiwebhu, esona sixeko sikufutshane asikude (imizuzu engama-30 kuphela ngebhasi).
Le ndawo iya kukuvumela ukuba uqhagamshelane kwakhona nendalo… Kodwa ngaphambi kwayo yonke into : nawe !
Ukuba ufuna ukubona ngakumbi : zininzi izinto ezenziwayo ezijikeleze iFinca El Arbol! Umzekelo unokuchitha usuku kwi-AMAZING Canyon De Somoto kwaye ukonwabele ukuqubha kunye nokuhamba phakathi kwamatye nemilambo.
E-Dipilto (eyona dolophu ikufutshane) okanye e-Ocotal (esona sixeko sincinci sikufutshane) ungakonwabela ukutya kwasesitalatweni, utye kwiindawo zokutyela, undwendwele imarike yendawo okanye uye kuthenga igrosari. Ungathatha izifundo zesiginci, ndwendwela umenzi wegitala wobugcisa, uthathe iiklasi zeSpanish. Kwidolophu encinci yaseMozonte ungathatha iiklasi zobumba, tyelela icawa entle kunye ne-hillside chapel enemibono emihle, uchithe ubusuku kwintsapho okanye uthathe iiklasi zokuluka inaliti. Okanye ujonge iMiraflores Reserve kufutshane ne-Esteli (apho benza isonka samasi 'seSwiss' kunye netshizi yebhokhwe)...
Sazise ukuba unomdla kuyo nayiphi na le misebenzi, sinokukucwangcisa yonke into kwangaphambili!